Waxa lagu arko Extremadura | Wararka Safarka
Maxaa lagu arkaa Extremadura
Mariela Carril | | Espana, Maxaa la arkaa
Extremadura Waxay ka mid tahay ismaamulada Isbaanishka waxayna ka kooban tahay laba gobol, Badajoz iyo Cáceres. Waa dhul leh kumanaan sano oo taariikhi ah, oo ay ka markhaati kaceen doommoleyda, rinjiyeynta godadka iyo sanamyada ilaa maanta la hayo.
Millennia-kan ayaa ina keena meelo badan oo dalxiis loo tago iyo dhaqan aad u hodan ah, markaa maanta waxaan soo jeedinaynaa safar loo aado Extremadura iyo soojiidashadeeda. Maanta markaa waxa lagu arko Extremadura.
2 Waxa la booqanayo Extremadura
Waa aag in waa koonfur-galbeed Jasiiradda Iberia sidaan horay u sheegnayna waxay ka kooban tahay laba gobol oo caasimadoodu tahay magaalooyinka ugu dadka badan. Iyada oo leh diirimaad leh cimilo dhexdhexaad ahTamaandho, basbaas, tubaako iyo canab ayaa halkan ka baxa, oo laga sameeyo khamri dhadhan fiican leh.
ka romanka halkan ayey degeen, waxay dhisteen wadooyin, magaalooyin hodan ah oo leh goobo, suuqyo iyo dhismayaal dadweyne. Tusaale ahaan, Merida, waxay noqotay magaalo weyn, noole, dhaqan ahaan hodan ku ah. Markii dambe boqortooyadu way dhici doontaa oo dadyowga shisheeyaha ah ayaa imaan doona, oo ay ka mid ahaayeen Visigoths, barokacay markooda Saracens xilliyadii dhexe.
Este mudada muslimka Isagu kama hodan ahayn kan Roomaanka iyo socday shan qarni ilaa Reconquest, oo leh Boqortooyada León marka hore iyo Boqortooyada Castile markii dambe. Midowgii labada boqortooyo ka dib labadii gobol ee Extremadura ee ka hooseeyay taajyadaas ayaa iyaguna midoobay. Wadaaggii Yuhuudda, Masiixiyiinta iyo Muslimiinta wuxuu ku dhammaaday amarkii Boqortooyadii Kaatoligga ee ahayd in dhammaantood ay u soo jeestaan ​​Masiixiyadda ama la eryo.
Qaar badan oo ka mid ah dalxiisayaashii Isbaanishka ahaa ee yimid Ameerika qarnigii XNUMXaad waxay ka yimaadeen Extremadura. Tusaale ahaan, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pedro de ValdiviaMarkii dambe khilaafaadka gudaha iyo Dagaalkii Xorriyadda Isbaanishka ayaa iman lahaa, iyo gacantooda, murugo iyo rafaad iyo guuritaan ballaaran oo gudaha ah si looga baxsado.
Waxa la booqanayo Extremadura
Markaan idhi Extremadura wuxuu leeyahay qarniyo taariikh ah, mabda 'ahaan waa inaan ka hadalnaa dhaxalka boqolaalka, kumanaan sano. Ee muddo roman ah waan booqan karnaa Merida Roman. Burburka Roman wuxuu ku yaalaa Plaza Margarita Xirgu waxayna daaqad u fureysaa qaab nololeedka Roman ee jasiiradda. waa Dhaxalka aduunka iyo mid ka mid ah goobaha qadiimiga ah ee ugu muhiimsan Spain.
Burburka Roomaanku wuxuu kujiraa darbiyada gumeysiga: waxaa jira tiyaatar, guriga amphitheater iyo amphitheater, circus iyo basilica. Waxaa jira Biyo-mareenka Mucjisooyinka, Pórtico del fro, Arch of Trajan, House of Mitreo iyo Macbadka Diana. Darbiyada dibedda waxaa ku yaal mareen biyo mareen ah, oo ah San Lázaro, buundo dul marta webiga Guadiana, Alange ilo biyo kulul (18 kiiloomitir meel u jirta Mérida, waxaa la rumeeysan yahay inay taariikhdeedu tahay qarnigii XNUMXaad ee AD, iyada oo guryaheeda leh), iyo laba biyo xireen, Proserpina iyo Cornalvo.
Dhismahan qadiimiga ahi wuxuu furan yahay Abriil ilaa Sebtember 9-ka ilaa 10-ka galabnimo iyo inta u dhexeysa Oktoobar iyo Maarso 9-ka ilaa 6:30 galabnimo. Albaabka laga soo galo qiimahiisu waa 15 euro oo dhan iyo 6 euro oo ah taallo kasta. Goob kale oo Roomaan ah ayaa ah Burburka Cáparra, dhowr kiilomitir u jirta magaalada Plasencia. Waxaa jira waddo uu soo booqdehu soo maro oo ku hagta xarunta tarjumaadda, saddex necropolises, irdo iyo amphitheater. Ogolaanshuhu waa bilaash.
Marka laga tago xilligii Roomaanka waxaan galnaa xilliga carabiga con Alcazaba, deganaanshaha boqorrada heerka tan iyo bilowgii Badajoz. Maanta waxa aan aragno waxay ka soo bilaabmeen xilligii Almohad, qarnigii XNUMX-aad, laakiin waxaa la rumeysan yahay in asalkiisu ka soo bilaabmay qarnigii XNUMXaad.
Alcazaba waa a qalcaddii oo sidoo kale xukuntay soohdinta uu la leeyahay Portugal waana mid aad u ballaadhan isla markaana culus. Waxay leedahay afar irdood waadna ka geli kartaa midkastoo ka mid ah. Marka laga soo tago albaabada Coraxa iyo Yelves, waxaa jira albaabada Apéndiz iyo Capitel, kuwaas oo ka imanaya xilligii Almohad.
Waxaa sidoo kale jira munaarado, Torre de Espantaperros, octagonal, oo ka dhex muuqda. Gudaha waxaa ku yaal Qasriga tirooyinka 'Roca' oo leh barxad maanta u shaqeeya Matxafka Gobolka ee Archaeological Museum, Tower of Santa María, Tower of the Episcopal Palace iyo beero
ka aragti dusha sare ee darbiga La Alcazaba way weyn yihiin. Ogolaanshuhu waa bilaash galitaankuna wax lacag ah lagama qaadin. Waxay ku taal Cerro de la Muela. In Cáceres waa tan Boqortooyada Boqortooyada ee Guadalupe Waxay ka timaaddaa hermitage yar oo noqday kaniisad Mudejar oo hoos timaadda xukunkii Alfonso XI. Kaniisadda monastery-ga waxay leedahay saddex nooc, tan hadda jirtaana waa qaabka Gothic. Meesha allabariga waxaa ku yaal sawirada wiilka El Greco, Jorge Manuel Theotocópuli.
Runtii waxay leedahay gudaha aad u qurux badan oo matxafyadooda ayaa u qalma: mid waa daabac, midna waa ranjiyeyn iyo farshaxan, mid kalena waa buugaag yaryar. Kaniisaddu waxay furan tahay 9:30 subaxnimo ilaa 1 galabnimo iyo 3:30 ilaa 6 pm. Qiimaha guud waa 5 euro. Kaniisad kale oo xiiso leh ayaa ah Boqortooyada Boqortooyada ee Yuste, dhisme monastic ah oo culus oo uu ku qaatay maalmihii ugu dambeeyay Carlos V. Joogitaankiisa ayaa qurxisay oo keliya. Kaniisad waa qayb ka mid ah Heritage Qaranka Spain. Xilliga jiilaalka wuxuu furmayaa Talaadada ilaa Axada 10 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, iyo xagaaga 10 subaxnimo ilaa 8 galabnimo. Albaabka laga galo waa 7 euro.
Haddii aan ka hadalno dhul dabiici ah markaa waa markiisii ​​hore ee Beerta Qaranka Monfragüe, loogu talagalay dadka jecel flora iyo ornithology. Waxay ku taalaa saddexagalka ay sameeyeen Plasencia, Navalmoral de la Mata, iyo Trujillo. Wabiga Tagus waa tiirarkiisa UNESCO-na waxay ku dhawaaqday jardiinada Kaydinta Biyo-Nololeedka.
Meelahan buuraleyda ah waxaa ku yaal barkado, durdurro, dhagaxyo, keymo iyo duurka kuwaas oo ah meesha ugu habboon ee a kala duwanaanta iyo hodanka iyo dhirta. Shimbiraha noocyadooda kala duwan, xuurta gaduudka ah, gorgorrada, gorgorrada, iyo xayawaanka sida duurjoogta, deerada, gorayada ...
Beerta dhexdeeda waxaa ku yaal qalcaddii Monfragüe, Carab, oo xilligaas ay degganayd Princess Noeima, sida ku cad halyeeyga jacaylka kiristaanka ah waana sababtaas darteed ayaa loo ciqaabay. Waxa kale oo jira magaalada ah Villareal de San Carlos, meesha aad joogi karto, wax ka cuni karto oo aad booqan karto xarumaha dalxiiska si aad uga hesho macluumaad ku saabsan aagga. Waxaa jira waddooyin calaamadeysan oo kaa qaadi kara baarkinka iyo gaar ahaan dhanka biyo-dhaca Gitano, oo dhererkiisu yahay 300 mitir oo ka sarreeya Webiga Tagus. Quruxdaas!
Meel kale oo la sameeyo trekking iyo helitaanka barkadaha dabiiciga ah waxay noqon karaan meeriska meeriska. ka Los Barruecos Taallada Dabiiciga ahGudaha Cáceres, waxaad ku arki doontaa dhul dhagax leh oo leh balliyo iyo guyaal. The Xeebta Orellana Waa xeebta kaydka isla magaca, Orellana la Vieja, ee Badajoz.
Waa a xeebta calanka buluuga ah waana xeeb gudaha ah. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Playa Costa Dulce' waxaadna sameyn kartaa ciyaaro isboorti oo kala duwan. Xeebta kayd kale, Gabriel y Galán kayd, laakiin Cáceres, ayaa ah Dhismaha Taariikhda ee Granadilla.
Waxay ahayd a magaalo ay aasaaseen muslimiin qarnigii XNUMXaad, darbi jiif ah, iyo geeddi-socodka dib-u-soo-kabashada si ay u noqoto goob dhaqan dalxiis. Waxay ilaalisaa gidaarkeeda Almohad, qalcadda ayaa loo rogay qalcadda Masiixiyiinta, guryaha qoysaska ee dadka muhiimka ah, mararka qaarkoodna asal ahaan dhismahooda, iyo kaniisadda kaniisadda qarnigii XNUMXaad.
Iyada oo liistadan kooban ee ah waxa lagu arko Extremadura waxaan hubaa inaan hoos u dhacayno. Waana in Extremadura ay tahay beel aad u ballaadhan, oo aan macquul ahayn in la maro dhammaanteed haddii aad maalmo yar haysato. Haddii tani ay tahay kiiskaaga, talobixintii ugu dambeysay, si loo xoojiyo meelaha iyo fikradaha: Mérida iyo Cáceres waa kuwo aan la aqbali karin, Badajoz sidoo kale, laakiin marka lagu daro waxa aan ku darno, haddii aad rabto wax ka aamusan magaalooyinkan, tag magaalooyinka. Halkaas ayaad runtii ku nasan kartaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Espana » Maxaa lagu arkaa Extremadura
Faedo oo reer Ciñera ah